व्यङ्ग्य : मल्ल युद्धमा, शासक–प्रशासक ? | Ratopati
शुक्रबार १४ फागुन, २०७७ Friday, 26 February, 2021
व्यङ्ग्य : मल्ल युद्धमा, शासक–प्रशासक ?
personबद्रीप्रसाद दाहाल exploreकाठमाडौं access_timeमाघ १२, २०७५ chat_bubble_outline0
शासक राज्यकोष हजम गर्ने राकस र प्रशासक नजरानाका बाकस भएछि जस्तोसुकै तन्त्रमा पनि सकस आउँछ । भोलिवादका कट्टर अनुयायी कर्मचारीतन्त्र र हावादारीवादका गफाडीका सर्दारतन्त्र चलेपछि त्यस्ता देशमा लोकतन्त्रको हजुर्बाउ पनि असमयमै खुट्टा तान्छ, जनगणतन्त्रको साँढे पनि असमयमै आँखा चिम्लन्छ । प्रणालीमा जब इमानको ‘इ’–मा बेइमानको ‘बे’–ले राज गरेपछि जस्तोसुकै खोल हाले पनि मूल्य, मान्यताविहीन राजनीति र प्रशासनले होल पक्षमा पक्षाघात मच्चाएर सधैँ देशलाई झगडाकै दलदलमा फसाउँछ । मुखमा रामराम बगलीमा छुरा, राजाको काम कहिले जाला घाम, बनेका शासक र प्रशासकबाट देश र जनताले आशा गर्नु ढुङ्गा टुसाउला र उन्यु फुल्ला भन्नु नै रहेछ ।
‘शासक’ राज्यको प्रबन्ध तथा सञ्चालन गर्ने व्यक्ति, सरकार, शासनकर्ता वा अधीनमा रहेका व्यक्तिहरूलाई अनुशासित र नियन्त्रित गर्ने एक प्रकारको सम्प्रभु हो । ‘प्रशासक’को आसय– राज्य, सङ्घ, संस्था, कार्यालय आदिका उच्च तहका प्रबन्धक तथा शासनकर्ता हो भनेर शब्द सागरले जाँगरसाथ दायित्वको घाँगर लगाइदिएको छ । यी दुई पदवर्ग सतहमा हेर्दा हात्ती र हात्तीछापे चप्पल, आमाको भाइ वा सानिमाको दाइजस्तै महसुस भए पनि गम्भीर नजरमा नियाल्दा बेग्लै अर्थका आस्वाद दिने खाले हुन् । शासक नीति निर्माता वा स्रष्टा हो भने प्रशासक निर्मित वस्तुलाई प्राण दिने र परिष्कारसाथ कार्यान्वयनमा उतार्ने तागत हो ।
समष्टिमा यी एउटै सिक्काका दुई पाटा हुन् भनेर बुइ चढाउँछन् टाठा बाठाले । ‘शासक र प्रशासक राकस वा राक्षस, राच्छेस अर्थात् तुच्छ वा क्षुद्र भावनाका अहङ्कारी भएपछि ल्याइते र ब्याइते सौतासौतीझैँ परस्परमा रडाको मच्चिने रहेछ । एउटा जनताले छानेको मान्छे पो हूँ त भनेर बमबम भई पड्किन्छ भने अर्को म त टुप्पी बाँधेर मुठ्ठी कसी पढेको मनुवा पो हुँ त भनी अहङ्कार छाद्छ । अनि सेवा आयोग लडेर पाएको यो पद कसैको उपहार वा बक्सिस हैन भनी छाती तन्काउँछ । स्थायी सरकारको स्तम्भ पो हुँ त भनेर फाँ—फाँ र फुँ—फुँ गरिदिन्छ र सिँगौरीसमेत खेल्छ । अनि त त्यहीँ थालनी हुन्छ खुल्ला मल्लयुद्ध ।
अविकसितदेखि सङ्क्रमणकालीन र विकासोन्मुख राजनीतिक संस्कृतिले गाँजेको देशमा शासक तथा प्रशासक भन्ने जन्तु कहिले नङमासु, दूधपानी, देहछाया र रामसीताजस्ता अभिन्न देखिन्छन्, भने कहिले हड्डीका लागि ङ्यार ङ्यार् र ङुर्ङुर् गर्ने मृगदंशकजस्ता । यी दुईकै मिलीभगत्मा राज्यकोश बेहोस भएर दोहनको मारमा पर्छ । करको करकरमा धरमर भएर जनता जनार्दन दुनिँदै हेपिँदै पाताल रसातलतिर पुग्छन् ।
आधुनिक भाषामा भन्दा यी भागबण्डावादका प्रवर्तक खञ्चुरामका हुलहरू स्यालका मित, गिद्दका सहोदर भाइ र ब्वाँसाका संस्करण हुन् भनेर कतिपय आवेगमा बर्बराउँछन् पनि । ल हेर्नोस् आज अधिकांश शासक र प्रशासक कसको महल ठडिएको छैन ? काठमाडौँलगायत सुविधासम्पन्न सहरहरूमा । यिनैका किसिम– किसिमका गाडी, बैङ्क ब्यालेन्स, धार्नी, मन र टनमा बहुमूल्य धातु टनाटन छन् । सहकारी, कर्पोरेट, अस्पताल, बोर्डिङ स्कुलमा यिनै अंशियार, मतियार, गतियार वा सञ्चालक बनेर कालो धनलाई सेतोमा रिफ्रेस गरिरहेका छन् । यही वर्गको मिलोमतोले कतिपय राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू कुम्भीपाक र रौरवमा परिणत भएका छन् । मेलम्चीजस्ता आयोजना पेलम्चीमा पुगेर आकाशको फल आँखा तरी मर् बनाएको तीतै अनुभव छ । लाउडा, चेज एयर, गाई, गलैँचा, बाइडबडी, किलौँ किला सुन तस्करी, मानव बेचविखनका कहालीलाग्दा काण्ड र दुर्घटना गनेर साध्यै छैन ।
भागबण्डाको अण्डा कोरल्दा यी लोभी र पापी नामका दुई भाइ कहिलेकाहीँ कुकुर बिरालो बनेर आफू नाङ्गेझार हुन कत्ति पनि लाज मान्दैनन् पनि । पदीय गरिमालाई लघिमा बनाएर कार्यालय परिसरमै जुडो, कराँते र गदायुद्ध गर्न तम्सने शासक प्रशासकको रमिताले देशले मुहार फेर्ने हैन गुहार ! गुहार ! गर्नुपर्ने अवस्था छ । अपवादमा केही असल शासक प्रशासक बत्ती बालेर खोज्दा भेट्टाउन सकिएला तर दुर्भाग्य तिनीहरू कि पछिल्लो समय पार्टीको टिकट पाउनबाट वञ्चित छन् त प्रशाक छ भने सरुवा, घटुवा वा खोसुवामा दण्डित भइरहेका हुन्छन् । अधिकांश ताता बिचौलिया र लुटतन्त्रका राता सरदारजस्तै पो देखिन्छन् त बा ! यिनीहरूका सुशासन, समृद्धि, पारदर्शिता, चुस्त प्रशासन, भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता, मुस्कानपूर्ण सेवा मात्र बकवास बनिरहेका छन् । समुन्नत र विकसित देश बनाउने ताजा ओठे बाजा यति कर्णकटु छन् जनता सुन्दा सुन्दा वाक्क ट्यार्र भइसके ।
राष्ट्रियताको ढोलक पिटेर नयाँ प्रणालीका उत्तोलक आपूmहरू बनेको पाँडे गफ दोचार्ने हाँडेहरूको गाँडेपन देख्दा कुन स्वाभिमानी देशभक्त यो सुकुलगुण्डे विकृतिमाथि आगो बन्दैन र ? शासकको शान देखाउन कहिले कार्यालयको कार्यकक्षमै प्रशासकमाथि डुँडो भाँचिने गरी गालामा झप्पु हानेर लप्पु खुवाउँछन् भने कहिले ट्वाइलेटमा थुनेर त कहिले कार्यालय परिशरबाट अर्धचन्द्राकार दिने क्रम चल्छ ।
स्थायी सरकार र अस्थायी सरकारबीचको यो टकराब आआफ्ना निजी स्वार्थमा बहार नआएको झोँकमा मञ्चन हुने गर्छ । कमिसन, घुस, नजरना, बक्सिस, उपहारमा जबसम्म शासक प्रशासकका मनमगज घुमिरहन्छन् तबसम्म देश विकास हैन विनाशतिर रफ्तारमै हान्निन्छ, समृद्धि हैन टाट र महादरिद्रताले आकाश चुम्छ । शासक प्रशासकमा देखिने घिनलाग्दा स्वार्थबीचको असभ्य वादविवाद देश र जनताका लागि अभिशाप कलङ्क, विसाद, क्षोभ र पश्चगमनको दर्बिलो खुराक हो । मल्लयुद्धमा अलमल्ल, असरल्ल र ट्वाल्ल परेका दुवैथरीलाई जनहितकारी बनाउन जनता र नागरिक समाजको अग्रगमन, ऊध्र्वगमन, परमार्थ भावको गुणात्मक मल्लयुद्धको आवश्यकता छ । होसियार ! नागरिक समाज र जनता जनार्दन ! खबर्दार ! गलत मल्लयुद्धमा अभ्यस्त शासक प्रशासकहरू !
कथा : पहिलो घुस
प्रणय दिवसमा डा.उपाध्यायले पुस्तकमा ल्याए ‘कफी लभ’
मातृभाषा राष्ट्रिय कविता महोत्सव–२०७७ सम्पन्न
पोस्तकको कथा संग्रह ‘मुन्नी’ बजारमा
सहकारी बैंकले अब सातै प्रदेशमा शाखा कार्यालय खोल्न पाउने
प्रेस काउन्सिलमा चार सदस्य नियुक्त
बेलायतमा कोरोनाबाट एक लाख २२ हजार बढीको मृत्यु
प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनापछि भारतको प्रतिक्रियाः यो नेपालको आन्तरिक मामिला हो
भारतका ७ प्रदेशमा ९० प्रतिशत कोरोना सङ्क्रमित
मेलम्ची परीक्षणः सुन्दरीजलस्थित सुरुङको भित्री ढोका बन्द
पाँच पटकसम्म चेक बाउन्स, बैंकिङ कसुरमा पक्राउ
हेमबहादुर मल्ल सम्मानबाट डा दास सम्मानित
काँग्रेस हतारिएर सरकारमा जाँदैन : प्रकाशमान सिंह